Venezoela : Inona No Lazain’Ireo Mpomba Ny Fitondrana Mikasika Ny Hetsi-Panoherana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2014 12:06 GMT
Raha mbola mitady làlana mba hitazonana ny elanelana sy hanohizana ireo hetsi-panoherana any amin'ireo faritra maro samihafa ao amin'ny firenena ny mpanohitra, ireo mpomba ny fitondran'i Nicolas Maduro kosa dia mandefa sary hosoka sy mametra-panontaniana ao amin'ny aterineto ny amin'ny eritreritr'ireo mpanao fihetsiketsehana. Angatahin'izy ireo ihany koa ny fisamborana , ny fitondrana azy ireo hotsaraina manoloana ireo fanakorontanana sy faharavan-javatra vokatr'ireo hetsi-panoherana sasany.
Araka izany dia misy firehana roa lehibe ao amin'ny haino aman-jery sosialy, izay mazàna mitovy foto-kevitra.
Tena sarotra ny mahafantatra ny fomba fijerin'ireo lafy roa ireo, noho ny hamaroan'ny fomba fijery sy ny fepetran'ireo vondrom-piarahamonina maro isan-karazany. Trandrahanay amin'ity santionany ity ny fomba fijerin'ireo mpomba ny fitondrana izay naparitaka tamin'ny aterineto nandritra ny herinandro maromaro lasa nisian'ny hetsika.
Ambaran'i Indira Carpio ao amin'ny bilaoginy sy ny Twitter ny ” fifanoherana hita” :
Hetsi-panoherana ho an'ny fahalalahana ; sambory miaraka amin'ny guarimbas [hetsi-panoheranan misy sakana/ fifandonana eny an-dàlambe] ny mpifanolo-bodirindrina aminareo.
Ny Guarimbas [es] no toerana izay ivorian'ireo vondron'ny mpanohitra hanaovana hetsika. Mametraka sakan-dàlana ry zareo : mampiasa fitaovana tsy ahafahana mivezivezy amin'ny làlana ry zareo, indraindray mandoro kodiarana, na zavatra hafa.
Zarain'i Delcy Rodríguez, Ministry ny Serasera sy ny Filazam-baovao Venezoelana amin'ny Twitter ity sary ity :
Tandremo ny amin'ireo andianà mpikarama an'ady milaza ho Chavistas [mpomba an'i Hugo Chavez filoha teo aloha] manafika tanàna.
Izao no lazain'i María Fernanda, amin'ny fanajàna ny hevitry ny mpanohitra :
Mandany andro amin'ny fanaovana ny tantara momba an'i Chavez izay hany inoany ny mpanohitra.
Izao kosa no ambaran'i Alejandro Salcedo :
Nicolas Maduro no filoha araka ny lalàm-panorenana voafidin'ny vahoaka Venezoelana
Ary mitatitra i Gabriel López :
Taorian'ny nahitako ireo zavatra izay nandramako nilaozana La Urbina, TSY MISY OLONA afaka hilaza amiko fa misy ilàna azy ny guarimba.
Tantarain'i Nicmer Evans amin'ny antsipirihany ao amin'ny bilaoginy ny fototry ny olana
Ankoatra ny fifampiampangana tsy misy vokany eo amin'ny roa tonta, raha milaza ny maha-tompon'andraikitra ilay hafa ny iray, na ny mifamadika amin'izay, dia [azontsika] omena ny ombivavy ny heloka ; na misy antony fahatelo na “x” lalaovina manodidina ny fanozongozonana, ny fanakorontanana, ary ny famoronana tsy fifankahazoana izay heverin'ny ankamaroan'ny vahoaka fa tsy misy vokany.
Sahiko ny milaza fa misy “antony x” tafiditra amin'ny sehatra politika rehetra izay mikononkonona tsy fifankazahoana, manentana ny fifankahalana, ary fanasemporana ny andrim-panjakana. Amin'ny lafiny iray dia nitondra herisetra atosiky ny fankahalana ilay izy ary nahita tany amin'ny mpianatra sasany, loharanom-baovao malalaka —mamatsy rà izay ilain'ny “Antony X ” hanatrarana ny tanjony, ary amin'ny lafiny iray hafa dia ny fanararaotana ataon'ny mpitandro filaminana hamahanana ny “Antony X ” mba hahatongavan'ny fifandonana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha izany no marina dia misy firaisana tsikombakomba eo amin'ireo izay tsy manàla sarona ireo izay tompon'andraikitra amin'ny andaniny sy ny ankilany.
Farany, manolotra volavolan-kevitra vitsivitsy izay heveriny fa laharam-pahamehana ny mpanoratra :
Tolo-kevitra maika : Ny fiaraha-miasan'ny Vahoaka te hiova ho fanitsiana ny Sosialista sy ny Chavista izay ahafahana manamboatra ireo hery politika anatiny, sy ny fanoherana ireo manohitra ny fiovana, ny ” fiovana anaty fiovana” tarihinao. Mbola fotoana izao ry akama.